” အချစ် ရေး ပြန်လည် အဆင် ပြေသွား ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ပရိ သတ် တွေ ကို ချပြ လာတဲ့ သဇင်နွယ် ဝင်း” – Shwewiki.com
ပရိသတ်ကြီးရေ သဇင်နွယ်ဝင်း ကတော့ မြန်မာ နိုင်ငံ ရဲ့အောင်မြင် တဲ့ အစီအစဉ် တင်ဆက်သူတွေထဲက တစ်ဦးပါ။ မင်းသမီးတွေ နီးနီးကို ယောကျာ်းလေး ပရိသတ်တွေရဲ့ ဝန်းရံခြင်းခံရသူ တစ်ယောက်ပါ။ ခုရက်ပိုင်းမှာလည်း အစီအစဉ် တင်ဆက်သူ သဇင်နွယ်ဝင်း ရဲ့ အချစ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးဖော်ပြခဲ့တာကြောင့် သဇင်နွယ်ဝင်း ကတော့ပြန့လည် ဖြေရှင်းခဲ့ပေမယ့် အတိအငျပြောခဲ့တာ မျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး။
ဒီနေ့မှာတော့ ပရိသတ် တွေရဲ့ မေးခွန်းတွေကို သင်ဇာနွယ်ဝင်း ရဲ့ ချစ်သူက ဖြေရှင်းပေးလိုက်ပြီလို့ ဆိုရမှာပါနော်။ နှစ်အချိန်အကြာကြီး လက်တွဲခဲ့တဲ့သူတို့နှစ်ဦး ကတော့ ဒီနေ့မှာ Datingပြုလုပ် ခဲ့ကြောင်းကို” သူအရမ်းစားတယ်!!”ဆိုတဲ့ စာလေးနဲ့ သဇင်နွယ်ဝင်းနဲ့ dateလုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပုံလေးကို သူမရဲ့ချစ်သူက တင်လာခဲ့တာပါ။
သူတို့စုံတွဲလေးကို ချစ်တဲ့ ပရိသတ် တွေကတော့ သူမတို့စုံတွဲ ပြန်အဆင်ပြေသွားတာကို သဘောကျကျေနပ်ကာ အားပေးနေတဲ့သူတွေ အများကြီးပါပဲနော်။ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီး အားလုံး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေး လိုက်ပါတယ်နော်။
” အခဈြ ရေး ပွနျလညျ အဆငျ ပွသှေား ပွီ ဖွဈကွောငျး ပရိ သတျ တှေ ကို ခပြွ လာတဲ့ သဇငျနှယျ ဝငျး”
ပရိသတျကွီးရေ သဇငျနှယျဝငျး ကတော့ မွနျမာ နိုငျငံ ရဲ့အောငျမွငျ တဲ့ အစီအစဉျ တငျဆကျသူတှထေဲက တဈဦးပါ။ မငျးသမီးတှေ နီးနီးကို ယောကျြားလေး ပရိသတျတှရေဲ့ ဝနျးရံခွငျးခံရသူ တဈယောကျပါ။ ခုရကျပိုငျးမှာလညျး အစီအစဉျ တငျဆကျသူ သဇငျနှယျဝငျး ရဲ့ အခဈြရေးနဲ့ ပတျသကျပွီးဖျောပွခဲ့တာကွောငျ့ သဇငျနှယျဝငျး ကတော့ပွန့လညျ ဖွရှေငျးခဲ့ပမေယျ့ အတိအငပြွောခဲ့တာ မြိုးမရှိခဲ့ပါဘူး။
ဒီနမှေ့ာတော့ ပရိသတျ တှရေဲ့ မေးခှနျးတှကေို သငျဇာနှယျဝငျး ရဲ့ ခဈြသူက ဖွရှေငျးပေးလိုကျပွီလို့ ဆိုရမှာပါနျော။ နှဈအခြိနျအကွာကွီး လကျတှဲခဲ့တဲ့သူတို့နှဈဦး ကတော့ ဒီနမှေ့ာ Datingပွုလုပျ ခဲ့ကွောငျးကို” သူအရမျးစားတယျ!!”ဆိုတဲ့ စာလေးနဲ့ သဇငျနှယျဝငျးနဲ့ dateလုပျဖွဈခဲ့တဲ့ ပုံလေးကို သူမရဲ့ခဈြသူက တငျလာခဲ့တာပါ။
သူတို့စုံတှဲလေးကို ခဈြတဲ့ ပရိသတျ တှကေတော့ သူမတို့စုံတှဲ ပွနျအဆငျပွသှေားတာကို သဘောကကြနြေပျကာ အားပေးနတေဲ့သူတှေ အမြားကွီးပါပဲနျော။ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီး အားလုံး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေး လိုကျပါတယျနျော။